ယနေ့သမိုင်းတွင်:2အောက်တိုဘာ 1890 အုပ်ချုပ်ရေးမှူး irakir တာဝန်ခံ ... - RayHaber
Homeအထွေထွေသမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir အရာရှိများ ...
02 / 10 / 2019 Levent Elmastaş အထွေထွေ, တူရကီ, ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် 0
အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ သူအရာရှိများအာရာဖတ်တို့အကြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရထားလမ်းအဆောက်အဦဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုရှိရာ Hijaz အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir ဂျီဒဟ်။
Hejaz မီးရထား, အော်တိုမန် Sultan II ကို။ 1900-1908 နှစ်အကြားကမက်ဒီနာနှင့်ဒမတ်စကတ်အကြားဒူလ်ဟာမစ်ရထားလမ်းအားဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
စူလတန် Abdulhamid II ကိုကပထမဦးဆုံးအလုပ်အဖြစ်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်အများအပြားအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီပလ္လင်တော်မှတက်ပြီအခါ။ နောက်တစ်နေ့ပြောင်းရွှေ့ "ကြေးနန်း" သူတို့တူရကီ၏ပိုင်နက်ထဲသို့ဆောင်သွင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ တစ်ဦးဆန်းသစ် Sultan ၌တည်၏။ အဗ္ဗဒူဟာမစ်ကသူလည်းဒမတ်စကတ်နဲ့မက်ဒီနာအကြားရထားလမ်းထက်ကြီးမားတဲ့အိပ်မက်ရှိကြောင်းကာလ။
ထိုအချိန်တွင်အော်တိုမန် Sultan မူဆလင်ကမ္ဘာ၏အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်။ II ကို။ အဗ္ဗဒူဟာမစ်ကသူမထိုက်မတန်ကိုမြင်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်သန့်ရှင်းသောမြေအကြားအကွာအဝေးကိုလျှော့ချဖို့ရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြိနျမှာ Hijaz မြေများအော်တိုမန်အင်ပါယာ၏အောက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အော်တိုမန် Sultan ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့မြေယာနှင့်ပါဝါဆုံးရှုံးမှုသူထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုဒေသတွင်းမှကျေးဇူးတင်စကားဒီရထားလမ်းတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတပ်တွေပေးပို့လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်နှင့်ဒေသ၏ခြုံငုံလုံခြုံရေးပေးလိမ့်မယ်။ ဒါဟာရထားလမ်း၏လုံခြုံရေးအစီအမံကျော်လွန်သည်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအချိန်တွင်ကုလားအုပ်နှင့်အတူသန့်ရှင်းသောပြည်သို့ခရီး 12 ရက်ပေါင်းဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်, သူသည်များစွာသောရောဂါများအတွက်တတ်၏။ က 12 တလျှောက်နေ့ကိုကုလားအုပ်စီးကိုဖန်ဆင်းသောကြောင့်, Hejaz ရထားလမ်းဤအချက်မှာအလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း, 24 နာရီရထားလမ်းအားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစရထားလမ်းနှင့်အာရပ်နိုင်ငံများ၏ဆောက်လုပ်ရေးမှစီးပွားရေးအလှူငွေသူတို့ကိုကြီးထွားကူညီရန်ရှိသည်မယ်လို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Ahmet Izzet Efendi, အ Admiralty မှတဆင့်တင်သွင်းသည်သူ၏အစီရင်ခံစာတွင်ဂျီဒဟ် 1892 ခေါင်းစဉ်လုပ်ရပ်အတွက်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး, အ Hejaz ရထားလမ်းအဆိုပြုချက်ကို၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နှင့်များစွာသောအရေးကြီးသောအချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။ Hejaz ယေဘုယျအားဖြင့်ဒေသနှင့်အစီရင်ခံစာအာရေဗျကျွန်းဆွယ်၏လုံခြုံရေးအပေါ်ကြောင့်ခဲ့အာရေဗျကျွန်းဆွယ်, ကိုလိုနီအင်အားကြီးနိုင်ငံများကပစ်မှတ်ထားခံရသတိပေးခံခဲ့ရသည်။ ဥရောပyönelipနှင့်အတူအာရေဗျကျွန်းဆွယ်မှစူးအက်တူးမြောင်း၏အဖွင့်သူတို့ကအာရပ်ကျွန်းဆွယ်ကိုဖကျြဆီးနိုငျကွောငျးဖျောပွခဲ့သညျ။ ဒါဟာအစကဒီအစီရင်ခံစာအတွက်သာကာကွယ်ရေးအတွက်ပင်လယ်မှကုန်းကြောင်းတစ်ဦးတိုက်ခိုက်၏မျက်နှာကိုအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာဘုရားဖူးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ကြောင့်အစ္စလာမ့်လောကရှိအော်တိုမန်ပြည်နယ်များ၏နိုင်ငံရေးအနေအထားအားကောင်းလာစေရန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်လိမ့်မယ်။ Ahmet Izzet Efendi ရဲ့အစီရင်ခံစာ 1892 အတွက်ဆူလ်တန်မှပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ II ကို။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို feria Mehmet Sakir Pasa အတွက်ဒူလ်ဟာမစ်အစီရင်ခံစာအကဲဖြတ်ဘို့စေလွှတ်အမ် Shakir Pasha အသစ်တစ်ခုရထားလမ်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံရေးအကြိုးခံစားခှငျ့မြား၏အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
စူလတန် II ကို။ ရထားလမ်းများဆောက်လုပ်၏အစ္စလာမ့်ကမ္ဘာ၏ဒူလ်ဟာမစ် Khan ကသူသည်အလွန်အကျိုးရှိမည်ဟုပြောပါတယ်ရသောအဘို့စီမံကိန်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ သို့သော်အော်တိုမန်တပ်ဖွဲ့များ Hijaz သံလမ်းမကြီး၏ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ်တွေ့ဆုံရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ကြဘူး။
အဆိုပါ Hejaz မီးရထားနေသော်လည်းကြောင့်စီးပွားရေးပြဿနာများပြုနေပါသည်
အဆိုပါ Hejaz ရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေး 1900 အတွက်ဒမတ်စကတ်စတင်ခဲ့သည်။ Meissner ရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေး၏အစအဦးမှာဂျာမန်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတာဝန်များယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စာချုပ်သည်အခြားရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လုပ်တူရကီအင်ဂျင်နီယာအကြား သာ. ကြီးမြတ်မှုနှုန်းခဲ့သည်။ အလုပ်သမားများတူရကီနှင့်ဒေသ၏လူဦးပါဝင်သည်။4သန်းပေါင်စီမံကိန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုက်ညီတဲ့မှထင်ခဲ့သည်။ ဦးခေါင်းအော်တိုမန်မကြာမီဖွင့်ဖမ်းခြင်းနှင့်လမ်းအပေါ်အခြားအပန်းဖြေကိုရှာဖွေဖြုန်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုချေးငွေထုတ်ယူစေသဖြင့်, ဥရောပပြည်နယ်များ, ဒါပေမယ့်သူတို့တစ်တွေကြီးတွေပိုက်ဆံ4သန်းပေါင်အရှုံးမပေးရန်သဘောတူခြင်းမရှိပေ။ ထို့နောက်သူကလူထုအခြေပြုအစေခံကျွန်၏လစာကြားဖြတ်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများမီးရထားမှပံ့ပိုးရောင်းချခဲ့ကြသည်။ အပြင်အခုတော့ရွာသားတွေ, တံဆိပ်ခေါင်းများနှင့်သားရေသားကောင်များ၏ရောင်းရငွေမှဆင်းသက်လာအားလုံးအမြတ်အစွန်းအတွက်မီးရထားပေါ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ သူတို့ကအစ Sultan ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပထမဦးဆုံးလှူဒါန်းမှု "Hijaz ရထားလမ်းလိုင်း Push ကိုခလုတ်" ရန်ပုံငွေဖန်တီးခဲ့ လုပ်. , လုံလောက်မှုမရှိယူဆနေကြသည်။ အတူတူမီးရထား၏ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်လှူဒါန်းရန်ပုံငွေအပြင်ရာထူးဂုဏ်ရှိန်, ဗျူရိုကရက်, ပြည်နယ်, ပညာရေး, တရားမျှတမှုနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ Sultan ။ အဆိုပါ Hejaz ရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအားလုံးအစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံများရှိဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားမွတ်စလင်များကဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့လူအားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့သည်ရထားလမ်းအချိန်ဆောက်လုပ်ရေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏နယ်မြေပြင်ပမှာတည်ရှိပြီးဧရိယာ၏တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှတဆင့်အလှူငွေများစေရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ တူနီးရှား, အယ်လ်ဂျီးရီးယား, တောင်အာဖရိက, အီရန်, စင်္ကာပူ, တရုတ်, ဆူဒန်, ဆိုက်ပရပ်စ်, မော်ရိုကို, အီဂျစ်, ရုရှား, အင်ဒိုနီးရှား, အမေရိကား, ဗြိတိန်, ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား, ပြင်သစ်နှင့်ဘော်လကန် Hijaz နိုင်ငံအများအပြား, ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသည်သံလမ်းမကြီးများတည်ဆောက်ခြင်းတို့အတွက်ပိုက်ဆံလှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။ အော်တိုမန်ဘာသာရပ်များအတွက်ဆူလ်တန်၏ Non-မွတ်စလင်နိုင်ငံသားများ၏လှူဒါန်းငွေကိုလက်ခံစကားပြောခြင်း, ယုဒလူတို့အလှူငွေလကျမခံခဲ့ပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, က Sultan လက်ခံဖို့ယုဒအမျိုး၏ရိုးသားမှုကိုမှဦးဆောင်သူလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၎င်းတို့၏အသိမယုံကြည်သောကြားပြောလေ၏။ အာမန်အတွက် 1903 နှစ်ပေါင်းရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး, အ 1904 ခုနှစ်တွင် Maanen ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူမသည်ဗြိတိန်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး, အော်တိုမန်အင်ပါယာ၏ Aqaba Maanen ကနေပင်လယ်နီမှတစ်ဦးအပိုဆောင်းလိုင်းဖြတ်သန်းသွားချင်တယ်။ ဆိုးကျိုးကြိုဆိုမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ဗြိတိသျှနှင့်အော်တိုမန်ခေတ်သူတို့ရုံစူးအက်တူးမြောင်းမှကွာ, ဧဒုံပင်လယ်မှစောင့်ရှောက်ချင်တယ်။ အပေါ်မှာတင်သော, အော်တိုမန်ခေတ်ကဒီစိတ်ကူးကိုတက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထိုအခါဟိုင်ဖာရထားလမ်း 1905 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်ရောက်လာတယ်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်၏ 1905 ခုနှစ်တွင်သူ Mudevver ဖို့မီးရထားလမ်းရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ 1 စက်တင်ဘာလ 1908 ထဲမှာ "Hejaz မီးရထားလိုင်း" ပြီးစီးခဲ့ပြီ။ မက်ဒီနာမှပထမဦးဆုံးခရီးသြဂုတ်လ 27 1908 ကျင်းပခဲ့သည်။
ရထားလမ်းများဆောက်လုပ်စဉ်အတွင်း။ Hazrat ဒူလ်ဟာမစ်နှင့်သန့်ရှင်းသောမြေရှိလူနှောင့်အယှက်။ မိုဟာမက် (PBUH) စိတျဓာတျအနှောငျ့အယှခံရဖို့မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။ သူကရထားလမ်းအောက်မှာကခံစားခဲ့ရdöşeterekကွပ်မျက်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ တိတ်ဆိတ်စက်ခေါင်းဒေသတွင်း၌အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Hejaz ရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့်နျဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ П. Abdulhamid "လက်ရှိအိုဆူလ်တန်-i Alishan, တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်Şanar efzunt ရ" ကဲ့သို့အများအပြားဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ရထားလမ်းများဆောက်လုပ်နေစဉ်ယင်းဒေသများတွင်နေထိုင် Hijaz ဒမြအဖွဲ့များကိုတှငျတှေ့နှင့်ရထားလမ်းများဆောက်လုပ်ရေးဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Hejaz ရထားလမ်းတံတားနဲ့ culvert 2666,7သံတံတား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း 9, 96 ဘူတာရုံ,7ရေကန်, ရေတိုင်ကီ 37,23 ဆေးရုံနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ဆောက်လုပ်ရေးစဉ်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မီးရထား၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် 3,5 သန်းပေါင်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ П. ဘုတ်အဖွဲ့ဒူလ်ဟာမစ်ထို့နောက် Hejaz မီးရထားပေါ်ကြပြီစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အမည်ပြောင်းလဲခြင်း download လုပ်ပါ။ သူတို့ပြောင်းလဲသွားသကဲ့သို့မိမိအမည်ရင်းနေစဉ်အမည် "Hejaz မီးရထား", "Hamidiye-Hejaz မီးရထား" ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအပစ်အခတ်ရပ်စဲရန်စာချုပ်ဇန်နဝါရီလ71919 လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့်အတူအော်တိုမန် Hejaz အပေါငျးတို့သဒေသများရှိယင်း၏လွှမ်းမိုးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ Hejaz ရထားလမ်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုအော်တိုမန်အင်ပါယာ၏လက်မှသိမ်းယူခဲ့သည်။ Fahrettin Pasha အစ္စတန်ဘူလ်မှမက်ဒီနာ၌တွေ့သောသန့်ရှင်းသောရှေးဟောင်းပစ္စည်းယူလာနိုင်ခဲ့သည်။ Hejaz မီးရထား 1 ။ ဒါဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်သည်အထိပြင်းထန်စွာအသုံးပြုသည်။
ပြည်ထောင်စု၏အချိန်မှာလုပ်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှိမ်အကူအညီများပိုမိုထက်ထက်ဝက်အသုံးပြုသောနှင့်သရေကျ built-in ခံရဖို့ဆက်လက်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း Hejaz ရထားလမ်းမကြာမီဖြစ်ခဲ့သည်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ အရာရှိတွေသွားပါရှိရာ Hijaz အတွက်အာရာဖတ်နှင့်ဂျစ်ဒါအကြားအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir ... 02 / 10 / 2012 ယနေ့တွင်သမိုင်းအောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာထဲမှာ သူအရာရှိများအာရာဖတ်တို့အကြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရထားလမ်းအဆောက်အဦဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုရှိရာ Hijaz အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir ဂျီဒဟ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ အရာရှိတွေသွားပါရှိရာ Hijaz အတွက်အာရာဖတ်နှင့်ဂျစ်ဒါအကြားအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir ... 02 / 10 / 2015 ယနေ့တွင်သမိုင်းအောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာထဲမှာ သူအရာရှိများအာရာဖတ်တို့အကြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရထားလမ်းအဆောက်အဦဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုရှိရာ Hijaz အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir ဂျီဒဟ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir အရာရှိများသည် သွား. 02 / 10 / 2016 ယနေ့တွင်သမိုင်းအောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာထဲမှာ သူအရာရှိများအာရာဖတ်တို့အကြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရထားလမ်းအဆောက်အဦဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုရှိရာ Hijaz အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir ဂျီဒဟ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir အရာရှိများ ... 02 / 10 / 2017 ယနေ့တွင်သမိုင်းအောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာထဲမှာ သူအရာရှိများအာရာဖတ်တို့အကြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရထားလမ်းအဆောက်အဦဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုရှိရာ Hijaz အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir ဂျီဒဟ်။
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ကြောင့်ဂျာမန်ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုင်းမှ Thessaloniki အတွက်အောက်တိုဘာလ91890 Deutsche Bank ၏ဂိမ်း ... 09 / 10 / 2012 အောက်တိုဘာလ91940 Elazığ-Palu ပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ5သန်း TL Haymil Const ။ Ltd. , SRK ။ သူပေးထားခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ91890 Deutsche Bank တို့ကြောင့်ဂျာမန်အုပ်စု Thessaloniki အတွက်လိုင်းကျောင်းတိုက်သရုပ်ဆောင်၏ကိုယ်စားအပေါ်လိုက်လျောသည့်အဲဖရက်အမ် Kaulla ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ ယခင်က Feriz အမေရိကန်တွေအားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ91918 Taurus နဲ့ Amanus ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေး xnumx't စတင်ခဲ့သည်။
ဓါတ်ရထားအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရေပြတ်တောက်မှုကြောင့် Kepez ဇာတိမှာ Aksu
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ အရာရှိတွေသွားပါရှိရာ Hijaz အတွက်အာရာဖတ်နှင့်ဂျစ်ဒါအကြားအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir အရာရှိများသည် သွား.
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ကြောင့် Deutsche ဘဏ်မှ Thessaloniki အတွက်အောက်တိုဘာလ 28 1890 လိုက်လျောလိုင်းကျောင်းတိုက် ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: Thessaloniki ၏အောက်တိုဘာလ91890-ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုင်း ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: အ Thessaloniki-လိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်း၏အောက်တိုဘာလ 28 1890 လိုက်လျော ...
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (284) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)